महिलाका लागि आकर्षक गन्तब्य बन्दै कुवेत, जेठ महिनामै १ हजार ६ सय ७६ जना कुवेत पुगे — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > महिलाका लागि आकर्षक गन्तब्य बन्दै कुवेत, जेठ महिनामै १ हजार ६ सय ७६ जना कुवेत पुगे
महिलाका लागि आकर्षक गन्तब्य बन्दै कुवेत, जेठ महिनामै १ हजार ६ सय ७६ जना कुवेत पुगे
काठमाडौ । कुवेतमा व्यक्तिगत प्रयासमा घरेलु कामदार (हाउसमेड) बन्न जाने महिला ह्वातै बढेका छन् । गत जेठ महिनामा मात्रै १ हजार ६ सय ७६ जना कुवेत गएको बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जेठमा त्यसरी गएका मध्ये अधिकांश महिला नै भएको विभागको भनाइ छ । संस्थागत जिम्मेवारी नभएपछि ग्रामीण भेगका अशिक्षित महिला दलाल मार्फत कुवेत गइरहेका छन् ।
नेपाल र कुवेतका एजेन्सीबीच कुनै सम्झौता वा संयन्त्र नभएकाले महिलाहरू व्यक्तिगत रूपमा त्यता गइरहेका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा केही नेपाली एजेन्सीहरूको समेत यसमा संलग्नता रहेको शंका गरिएको छ । सरकारले दूतावासको जिम्मेवारीमा हाउसमेड पठाउने नीति लिएपछि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई कुवेत जाने महिला बढेका हुन् । महिला कामदारलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था नहुंँदा अनधिकृत रूपमा जाने गरेका थिए । बिनास्वीकृति गएका महिला कामदारहरूको संख्या कुवेतमा मात्र ३० हजार रहेको अनुमान छ ।
केही देशहरूले प्रतिबन्ध लगाउने, उमेरको हद तोक्ने र एजेन्सीहरूबीच सम्झौता गराएर मात्रै अनुमति दिन थालेकाले नेपाली कामदारको संख्या वृद्धि भएको हो । सरकारले गत वर्षदेखि न्यूनतम पारश्रमिक, बिमा, तालिम लगायत आधारभूत मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा नेपाली राजदूतावासको सिफारिसमा घरेलु कामदार पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृतिमा निकै संवेदनशील भएको जनाएकोछ । संख्या अत्यधिक बढ्यो । यसमा संस्थागत जिम्मेवारी नदेखिएकाले पठाउने दलाल पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको विभागको भनाइ छ । निकै कम उमेरका युवतीहरू कुवेत गइरहेको पाइएको छ ।
विभागले कम उमेरमा जाने युवतीको संख्या बढिरहेकाले विद्यमान प्रणालीमा थप सजगता अवलम्म्बन गर्न आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ । कुवेतमा महिला कामदार लैजान लाइसेन्सप्राप्त एजेन्सी छन् । अरू देशबाट ती एजेन्सीले सरकरी निकाय वा स्थानीय एजेन्सीमार्फत ल्याउने गरेका छन् तर नेपालबाट त्यस्तो गरिरहेको छैन । नेपालका एजेन्सीहरू भने संस्थागत रूपमा महिला कामदार पठाउन इच्छुक देखिएका छैनन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने हाउसमेडले सबै जिम्मेवारी आफैंले लिनुपर्छ ।
२०७५ असोज १४ गते ०९:०० मा प्रकाशित
सेयर किन्ने बढे, लगानीकर्ता प्रभु बैंकमा बढी झुम्मिए
संयुक्त अस्थायी करार शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले असोज १५ र १६ गते सामूदायिक विद्यालय बन्द गर्ने
तीन महिनामा १७९ उद्योग थपिए
छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि दरखास्त आह्वान, कुन कलेजमा कति छुट ?
सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा छ ? अब घर बनाउन १ करोडसम्म कर्जा मिल्छ !
हिमालयन बैंकका ग्राहकहरुलाई ७५ भन्दा बढी स्थानमा विशेष छुट